Nagarik News - सस्ता आइफोन कस्ता छन्? (फोटो सहित)
सस्ता आइफोन कस्ता छन्? (फोटो सहित)
21 Aug 2013 | 15:54pm
बुधबार ५ भाद्र, २०७०
सस्ता आइफोनको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ? अब धेरै पर्खनु पर्दैन। दुई हप्तापछि एप्पलले आइफोन फाइभ सी र आइफोन फाइभ एसलाई एकै साथ बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रतिष्ठिति अमेरिकी पत्रिका वालस्ट्रिट जर्नलले एप्पलले आइफोन फाइभ सी र फाइभ एसलाई बजारमा पठाउन थालिसकेको र ती सेप्टेम्बरको सुरुमै बजारमा पुग्ने उल्लेख गरेको छ। एशियाली बजारमा भने यी स्मार्टफोनहरु सेप्टेम्बर २० मा मात्रै लञ्च हुने जनाइएको छ। जापानको प्रतिष्ठित बिजनेस पत्रिका निकीले सेप्टेम्बर २० मा टोकियोबाट एशिया क्षेत्रका लागि दुवै स्मार्टफोन लञ्च हुन लागेको जनाएको छ। प्लाष्टिक निर्मित सस्ता आइफोनले सामसङको बजारलाई टक्कर दिने ग्याजेट विश्लेषकहरुको दाबी छ।
कस्ता छन् फिचर?
आम उपभोक्तालाई लक्ष्यित गरेर ल्याउन लागिएको आइफोन सी नामका यी स्मार्टफोनहरु प्लाष्टिकले बनेका छन्। र सुरुमा कम्तिमा ५ रंगमा आउनेछन्। एप्पलले सस्ता आइफोनमा आइओएस सभेन अपरेटिङ सिस्टम राखेको एप्पलको चियचर्चो गर्ने म्याकर्‍युमरले उल्लेख गरेको छ। ९ एमएम बाक्लो रहने आइफोन सी मा सिङ्गल कोर ए-फाइभ प्रोसेर छ। एप्पलले यो प्रोसेरलाई आइफोन फोर एस र फाइभमा पहिलै प्रयोग गरिसकेको छ।
डिजाइन बडी कर्ब राउन्डेड रहने यी आइफोनहरुको भोल्युम बटन आइपडको जस्तै लामो रहनेछ। आइफोन सी ६४ एमएम चौडाइ र १२०एमएम लम्बाइ रहनेछ। स्क्रिन साइज आइफोन फाइभ शैलीकै ४ इञ्चको रेटिना डिस्प्ले रहनेछ। सस्ता आइफोनमा ८ मेगापिक्सेलको क्यामरा राखिएको छ। एप्पलले सस्ता आइफोनमा धेरै फिचर्स आइफोन फाइभसँग मिल्दाजुल्दा राखेको छ। यसले गर्दा आइफोन फाइभका प्रयोगकर्तालाई आफूलाई अपग्रेड गर्ने दवाब पर्नेछ।
एप्पलले महँगो बजारसँगै सस्तो बजारमा पनि कब्जा गर्न यस प्रकारका आइफोन ल्याउन लागेको बताइन्छ। यस भन्दा पहिला एप्पलले आफ्ना पुराना मोडलहरुलाई सस्तोमा बेच्ने पहल पनि गरेको थियो। तर बजारमा चलेका सस्ता एन्ड्रोइड फोनले उसको योजनालाई विफल पारिदिएपछि सस्ता आइफोन ल्याउन लागेको हो।
रंगीचंगी नयाँ आइफोन
आइफोन सी को मूल्य ५४९ डलर, उपभोक्ता स्तब्ध
माइक्रोसफ्टले फेरि ल्यायो आइप्याडविरोधी विज्ञापन (भिडियो सहित)
आइफोन ५ विश्वको सर्वाधिक बिक्री हुने स्मार्टफोन
माइक्रोसफ्टले बनायो आइप्याड विरोधी विज्ञापन (भिडियो सहित)